Madaxweynaha Somaliland oo Goob-fagaare ah Khudbad Uga Jeediyey Dadweynaha Laascaanood – WARSOOR
Laascaanood – (warsoor) – Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Siilaanyo ayaa maanta goob fagaare ah khudbada uga jeediyey dadweynaha magaaladda Laascaanood ee gobolka Sool.
Madaxweynaha oo safar shaqo ku maraayey goboladda Bariga Somaliland madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladda Adhi-cadeeyey ka hor intii aanu uga sii gudbin magaaladda Laascaanood.
Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisu waxay soo dhawayntii ugu balaadhnayd kala kulmeen shacbiga deegaamada Guumays, Yagoori, Tuulada Samakaab iyo Degmada Cusub ee Adhi-cadeeye. Waxanay shacbiga ku dhaqan halkaasi ay subaxnimadii hore jidadka iyo koonayaasha magaalada ku qaabileen kuna soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo sawaxan qiiro iyo kalgacal ka muuqdo, taasoo ay hoggaaminayeen, garaadada, ugaasyada, salaadiinta, cuqaasha, masuuliyiinta deegaamadaasi, aqoonyahanka, waxgaradka iyo bulshada qaybeheeda kala duwan.
Ø Waxaan aaminsanahay in la qaybsado hawsha, halabadda iyo hantida qarankan yagleesha ah
Ø Waxaan garwaaq-sanahay in ay jid iyo daw tahay, in dhib iyo dheef la wadaago.